Miyuu Pep Guardiola qorsheynayaa inuu dhawaan ka dhaqaaqo Kooxda Manchester City? – Gool FM
(Manchester) 15 Jan 2020. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu meesha ka saaray ka tagista kooxda uu macallinka u yahay si uu u sharfo qandaraaskiisa garoonka Etihad.
Iyadoo Man City aysan ku jirin qaab ciyareedkii fiicnaa ee kal ciyaareedkii hore wax badanna ay ka liitaan hoggaamiyeyaasha tartanka horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa haddana waxaa la soo jeediyay in Macallinka reer Spain uu isaga tagi doono kooxda dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Guardiola ayaan sidoo kale wali heshiis cusub qalinka ugu duugin kooxda ka dhisan waqooyi-galbeed England, iyadoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo xagaaga 2021-ka.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Telegraph, Tababare Guardiola ayaa qorsheynaya inuu sii joogo Man City ugu yaraan xilli ciyaareedka iyo barka soo socda, halkii uu raadsan lahaa tartan cusub dabayaaqada sanadkaan.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in 48-sano jirkaan uusan weli go’aansan haddii uu mustaqbalkiisa u hibeeyay kooxda Manchester City oo uu ku qaadanyo iminka sanadkiisii afaraad.
Kooxaha Juventus iyo Paris Saint-Germain ayaa horay loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan Macallinkii hore ee Barcelona, xilli wararka hadda ka imaanaya gudaha dalka England ay tilmaamayaan in Pep Guardiola uusan hadda diyaar u ahayn inuu isaga tago kooxda Manchester City.